Saxeexyadii Nicolas Pepe iyo Gervinho, Fasaxii Roben Van Persie, Iibintii Serge Gnabry iyo Sagaalkii Go'aan ee Ugu Xumaa Ee Kooxda Arsenal Qaaday Suuqa Iibka Ciyaartoyda - Gool24.Net
Saxeexyadii Nicolas Pepe iyo Gervinho, Fasaxii Roben Van Persie, Iibintii Serge Gnabry iyo Sagaalkii Go’aan ee Ugu Xumaa Ee Kooxda Arsenal Qaaday Suuqa Iibka Ciyaartoyda
Taageerayaasha kooxda Arsenal kuma raaxeysanayaan daawashada xiddigoodi hore ee Serge Gnabry kadib bandhigii il qabadka lahaa ee uu kusoo bandhigay garoomada, kagana caawiyey Kooxdiisa Bayern Munich inay gaadhaan finalka Champions League habeenkii Arbacada.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee Jarmalka ayaa dhaliyay laba gool qaybtii hore ee ciyaarta iyadoo kooxda Reer Garmany ay 3-0 ku garaacday naadiga reer France ee Lyon si ay qaabilaan finalka kooxda Paris Saint-Germain.
Gnabry ayaa xilli ciyaareedkan dhaliyay 23 gool tartamada oo dhan, sidoo kalena wuxuu sameeyay 12 caawin.
Hadal haynta 25 jirka ayaa adduunka heysata kaasoo aan wax tixgalin ah ka helin kooxaha Arsenal iyo West Brom oo uu horay u soo maray, laakiin waqti kaddib waxa uu hadda ku jiraa heerkiisa ugu sarreeyay isagoo kooxihiisa hore tusinaya qaladkii ay sameeyeen markii ay fasaxayeen.
Ka tagitaankiisii ​​woqooyiga London waxay timid sanadkii 2016 markii kooxda Werder Bremen ay bixisay 5 milyan ginni si ay ula wareegta iyadoo xilligaas aanu laacibkani fursad ka helin Gunners oo uu gadhwadeen u ahaa Wenger.
Wenger waxa uu doonayay inuu sii joogo Gnabry Kooxda Afar sanno oo dheeraad ah laakiin tababarihii hore ee Arsenal waa inuu ka qoomameyaa in aanu samaynin wax badan si uu uga dhaadhiciyo Laacibkan inuu sii joogo kooxda.
Maaha Gnabry oo kaliya ciyaartoyda ay Gunners sida fudud u lumisay, waxaana jira laacibiin kale oo markii ay ka tageen Emirates fursadihii ay u baahnaayeen helay, isla markaana ku guuleystay koobab u galay diiwaankooda taariikhda, halka Arsenal ay u noqotay taariikh madow iyo qalad ay rikoodhka gashatay.
Qaladkii koobaad ahna kii ugu weynaa oo ay Arsenal Sameyso ayaa ahaa markii ay kabtankoodii Robin van Persie ka iibisay kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United iyo waliba inay 10 milyan oo Gini iyo ka badan kasoo bixiyeen Gervinho.
Haddaba, waxaanu eegeynaa sagaalkii go’aan ee ugu xumaa ee ay Arsenal samaysay, ayna tahay inay wax ka barato oo mar kale aanay iyagii oo kale samaynin:
1. Iibinta Serge Gnabry
Wenger ayaa carrabka ku adkeeyay in Gnabry aanu dooneynin inuu kusii negaado kooxda Arsenal, hadalkiisu run ayuu noqon karaa, laakiin Laacibkan garabka ka ciyaara ayaa sidoo kale qirtay sababtii uu uga tagey Arsenal uguna biiray Werder Bremen wuxuuna yidhi: “Si aan u helo fursad aan ku ciyaaro, horumar dheeri ah iyo inaan caawiyo kooxda.”
2. Saxiixa Nicolas Pepe ee ah £ 72 milyan
Iyadoo aan haatan loo tixgallin karin Pepe inuu ku fashilmay kooxda kaddib hal xilli ciyaareed oo uu ku qaatay, haddana waxa laga soo bixiyey lacag badan oo ahayd £72 milyan oo Gini, waana ciyaaryahanka ugu qaalisan taarikhda kooxda.
Xaqiiqda ah in Gunners lafteeda ay baadhayaan go’aankii ay lacag intaas le’eg ugu soo bixiyeen Pepe, haddana taasi waxa ay caddaynaysaa in ay wali su’aali ka taagan tahay.
3. Sii daynta Santi Cazorla
Xiddiga khadka dhexe ee reer ee Spain Cazorla ayaa ka tagay Arsenal markii uu qandaraaskiisu dhacay xilli ciyaareedkii 2018.
Ma uusan ciyaarin tan iyo markii uu dhaawac xun kasoo gaadhay kulankii Ludogorets bishii Oktoobar 2016, taasoo keentay in si lama filaan ah uu Cazorla qalliinno badan u maray waxaana loo sheegay inuu waqti badan garoomada ka maqnaan doona.
Kadib dhaawaca Cazorla oo aysan cadeynin dhaqaatiirta waqtiga rasmiga ah ee uu soo kacaayo laakiin Xiddiga ayaa kooxda Arsenal ku qasbay inay ka qoomameyso inaysan sii heysan waayeen kadib labo xilli ciyaareed oo cajiib ah oo xiddigan la qaatay kooxda Villarreal.
35 jirka ayaa dhaliyay 11 gool wuxuuna caawiyay sagaal kale Horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2019/20, Waxa uu sidoo kale ku soo laabtay xulka Spain, isagoo ciyaaray kulamadii isreebreebka Euro 2020.
4. Saxiixii Sebastien Squillaci
Waxaa loo soo saxeexay in lagu hagaajiyo daafaca kooxda Arsenal oo waqtigadaas aad u hooseeyay laakiin Xiddigan £ 6.5M laga soo bixiyay mudo dheer kuma qaadan inuu kasii mid ahaado kooxda waxaana la dagay dhaawac iyo qaab ciyaareed aan loo baahneyn.
Daafacan dhexe ee reer France ayay kooxda iska fasaxday seddex xilli ciyaareed ka dib, isagoo u saftay kooxda 7 kulan oo kaliya tartamada oo dhan labadii sano ee ugu dambeysay ee uu kooxda joogay.
5. Iibinta Robin Van Persie ee Man United
Rajada ah inay Kooxda sii heysato Xiddigan ayaa aheyd mid aad u hooseysay, Xilli Ciyaareedkii 2012 Van Persie waxaa qandaraaskiisa uga hadhsanaa hal sano kaliya wuxuuna horey u sheegay inuusan kooxda wax qandaraas ah u kordhin doonin.
BBC Sport ayaa werisay in Gunners ay diyaar u aheyd inay Van Persie ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaharka badan taariikhdooda laakiin dhabtii waligooda umay soo bandhigin qandaraas cusub.
Sidaasi darteed kooxda Arsenal ayaa nasiib u yeelatay inay aragto Van Persie oo ku guuleystay horyaalka Premier League iyo abaal marino qaali ah xilli Ciyaareedkii xigay ee 2013.
6. Saxiixa Gervinho
Sanadkii 2011, kooxda Lille waxaa joogay ciyaaryahanada Eden Hazard iyo Yohan Cabaye laakiin macalinka kooxda Arsenal Wenger ayaa doortay Gervinho.
Xiddiga reer Ivory Coast ayay kooxda Arsenal ku iibsatay adduun dhan £ 10.8m waxaana loo arkaayay inuu yahay badalka saxda ah ee Samir Nasri laakiin ma uusan noqon.
Gervinho ayaa dhaliyay kaliya 11 gool 69 kulan oo uu saftay kooxda waana mid ka mid ah saxiixyadii ugu xumaa ee soo mara taariikhda Arsenal.
7. Iibinta Wojciech Szczesny ee kooxda Juventus
Szczesny wuxuu ku soo barbaaray Arsenal, waxaana lagu cinqaabay qalad yar oo uu galay kadib markii lagu qabtay isagoo sigaar ku cabaya qolka labiska ka dib qaab ciyaareed xun oo uu soo bandhigay kulankii Southampton 2015.
Laakiin amaahda uu ugu dhaqaaqay Roma 2015 waxay u heyd horumar weyn kadib bandhigiisii quruxda badan ee kooxda Roma goolhayaha ayaa soo jiitay indhaha kooxda Juventus wuxuuna si rasmi ah ugu biiray 2017.
Seddex sano kadib Szczesny wuxuu ka mid yahay goolhayeyaasha ugu fiican Yurub isagoo ku guuleystay abaalmarinta goolhayaha ugu fiican Serie A xilli ciyaareedkan.
8. Sii daynta Aaron Ramsey.
Arsenal ayaana wax qandaraas cusub ah usoo bandhigin Aaron Ramsey Xilli Ciyaareedkii 2018 waxayna ku faraxsanaayeen inay daawadaan xiddiga reer Wales oo si xor ah uga tagaya kooxda sannad kadib.
Waxay ahayd hab dhaqan xun oo lagula kaco ciyaartoy u soo ciyaaray kooxda daqiiqadihii ugu badnaa uguna wanaagsanaa.
9. Saxiixa Marouane Chamakh
u soo guuritaankii Chamakh ee England ee 2010kii weli waxay niyad jab ku tahay taageerayaasha kooxda kadib markii ay arkeen waxaysan ka fileyn Weeraryahanka.
Wuxuu u dhaliyay 14 gool 67 kulan oo uu u saftay naadiga waxa uuna ahaa Weeraryahankii ugu xumaa ee kooxda soo mara dhamaadkii qarnigii tagay.